GoodReader, mpamaky antontan-taratasy izay tsy tokony hanjavona amin'ny iPad anao (kaody 4 no ampiasainay) | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | Fampiharana iPhone
Raha tsy maintsy miresaka momba ny andiana rindranasa tsy maintsy apetraka amin'ny iPad isika, dia ao amin'ity lisitra ity ny GoodReader. Ny rindranasa, natao hijerena antontan-taratasy, dia mirindra tsara miaraka amin'ny iOS ary mamela antsika hanokatra fisie mifanaraka aminy ao amin'ny GoodReader.
Ankoatry ny fahafahany manokatra antontan-taratasy mivantana avy amin'ny iPad, GoodReader koa dia manolotra andiana safidy hanafatra rakitra amin'ny fomba hafa toy ny mpizara WI-FI, amin'ny alàlan'ny mailaka Mail, rakitra .ZIP, iDisk, Dropbox, Google Docs , SugarSyng, iCloud ... tena mahomby tokoa amin'ity lafiny ity.
Raha te hijery ny fahafahan'ny GoodReader, eto ambany dia manana ny fisie rehetra mifanaraka aminy ity rindranasa ity:
Fisie Microsoft Office
Tranonkala amin'ny endrika HTML
Audio sy horonan-tsary
Satria maro ny olona ao amin'ny GoodReader, rehefa manafatra rakitra isika dia afaka mandamina azy ireo amin'ny lahatahiry ihany koa, manetsika azy ireo, mandika azy ireo, manome anarana azy ireo indray, manery azy ireo ao anaty fisie .ZIP na koa mandefa azy ireo any amin'ireo rindranasa hafa napetrakao amin'ny iPad .
Raha te hahita ireo sy ny zavatra hafa mety hatolotry ny GoodReader ianao, Ny developer sy ny iPad News dia manome anao ny mety handresena ny iray amin'ireo kaody fampiroboroboana efatra izay ampiasainay. Raha te handray anjara dia tokony hanatanteraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Araho ny iPad News amin'ny Twitter na tonga mpankafy anay amin'ny Facebook.
Tsindrio ny bokotra Twitter na Facebook izay lohany amin'ity lahatsoratra ity.
Mametraha hevitra amin'ity lahatsoratra ity.
Hifarana ny talata 1 Novambra amin'ny 22:00 alina ny antsapaka (ora peninsular Espaniola). Hisafidy ny mpandresy amin'ny alàlan'ny serivisy Random.org izahay ary amin'ny alina dia hampita ny anaran'ireo mpandresy amin'ny paositra iray izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » GoodReader, mpamaky antontan-taratasy izay tsy tokony hanjavona ao amin'ny iPad anao (kaody 4 no ampiasainay)
Grindin dia hoy izy:
Andeha hojerentsika raha misy mianjera ...
Mamaly an'i Molerin
Kelvin dia hoy izy:
Androany raha mahazo ny ahy aho!
Valiny tamin'i Kelvin
XR-Scully dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha tsara vintana aho ary mahazo an'ity fampiharana ity.
Valio amin'i XR-Scully
Dangior dia hoy izy:
Mahagaga ny kinova iphone, mila ny kinova iPad aho izao!
Mamaly an'i Dangior
Jara28 dia hoy izy:
Salama, te handray anjara amin'ny raffle aho. MISAOTRA
Valiny tamin'i Jara28
Oscar Gallego Ruiz dia hoy izy:
Hizaha raha mikasika izany
Valiny tamin'i Oscar Gallego Ruiz
Mila kaody fampidinana aho! Tsy maintsy mandresy aho!
Veronica Cortijo Muñoz dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha tsara vintana isika! Hitako ny fampiharana tena ilaina hitantanana ny naoty ao amin'ny oniversite
Valiny tamin'i Verónica Cortijo Muñoz
Mila kaody ihany koa aho ho an'ity fampiharana tena ilaina ity… Miarahaba anao.
Carlos Mauricio Lopez sary placeholder dia hoy izy:
Izay tadiaviko fotsiny. Fantatro fa handresy azy aho
Valiny tamin'i Carlos Mauricio Lopez
Tindriel dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha toa ka tsara vintana aho amin'ny fisarihana, satria ny tena marina dia ho tsara ho ahy ilay fampiharana ...
Mamaly an'i Tindriel
Brau dia hoy izy:
Fampiharana tsara ho an'ny Ipad
Valiny tamin'i Brau
Nety dia hoy izy:
Enga anie ho amiko ny vintana
Valiny tamin'i Nety
Etna dia hoy izy:
Manana fanamarihana marobe momba ireo fampiharana ireo aho ary manantena ny mikasika ahy. Mirary soa ho an'ny rehetra.
Valio amin'i Etna
Yeiyei dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha mikasika izany ny q no ai jb ... Hehe
Valiny amin'i Yeiyei
Andiguiller dia hoy izy:
Tongava mijery sao misy vintana!
Mamaly an'i Andiguiller
Cristogm1registrement dia hoy izy:
Hijery raha mikasika ahy io
Valio amin'i Cristogm1registro
Cosakait dia hoy izy:
Mamaly an'i Cosakait
Lisergio dia hoy izy:
Sambatra jalowin! Ary hijerena raha mikasika ahy izany
Mamaly an'i Lisergio
Borja Jesus dia hoy izy:
Valiny tamin'i Borja Jesus
David M dia hoy izy:
Tokony hananana amin'ny iPad ny iPad ary hanararaotra izany.
Valiny tamin'i David M
Anio no anjarako azo antoka
Ejido dia hoy izy:
Nanaraka anao hatramin'ny voalohany aho ary io no hevitro voalohany satria ny app dia manao azy tsara be.
Tohizo izany ry zalahy
Valiny tamin'i Ejido
Alvarocana85 dia hoy izy:
Tsy maintsy manandrana indray mandeha isika ...
Valiny tamin'i Alvarocana85
Tonydelpinogz dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha misy fanavaozana azy dia manolotra antsika ny kinova Espaniola, na dia mora be aza izany!
Valiny tamin'i Tonydelpinogz
Dulcineast_83 dia hoy izy:
Tena niresaka tamiko momba an'ity rindranasa ity izy ireo. Manantena aho fa nahazo ny kaody fampiroboroboana hanandramako ...
Valio amin'i Dulcineast_83
Isaac Agudo dia hoy izy:
Ny marina dia nisy mpiara-miasa tamiko efa naneho ahy ity rindranasa ity ary mahafinaritra, ampiasainy haneho hevitra amin'ny PDFs ary tena matihanina ny vokany! Te hanana izany koa aho
Valiny tamin'i Isaac Agudo
Socarey dia hoy izy:
Mendrika ny tiako ity programa ity, ampiasaiko any am-piasana izany fa tiako ho ahy ihany koa!
Mamaly an'i Socarey
Robertohernandez dia hoy izy:
Toa tsara be ity app ity
Valiny tamin'i Robertohernandezbalanza
@pernikebrao dia hoy izy:
Tiako izany, izay ilaiko fotsiny.
Mamaly an'i @pernikebrao
Serxinho dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao nanao ny raffle, hahitanao raha tsara vintana ianao.
Valiny tamin'i Serxinho
Javi_castilla dia hoy izy:
Mamaly an'i Javi_castilla
Trenti64 dia hoy izy:
Misaotra anao nitantana ireo fanomezana ireo ho anay.
Valiny amin'ny Trenti64
Joela117 dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny raffle mahita fa tsara vintana ny rehetra!
Mamaly an'i Joel117
Maurogeek dia hoy izy:
Elaela aho tsy nahita hoe ity app "tsy maintsy" isaky ny iPad ity, mbola tsy an'ny ahy io, izany no antenaiko handresena ity fampiroboroboana ity. fiarahabana
Mamaly an'i Maurogeek
Garatxa dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha tsara vintana aho fa mila fampiharana toa izao mba hiasa, misaotra tamin'ny fandraisana andraikitra!
Mamaly an'i Garatxa
Manantena aho fa tsara vintana aho ary mahazo ny 1 amin'ireo kaody promo 4. Mirary soa ho an'ny rehetra!
Avycc_05 dia hoy izy:
Toa faran'izay tsara ity fampiharana ity, antenaiko fa hahazo kaody… .. Misaotra anao
Mamaly an'i Avycc_05
Manantena aho fa hahazo kaody ,. ,,, mirary soa ny rehetra
Cmlrz1 dia hoy izy:
Mirary soa ho an'ny rehetra hahafahantsika mankafy an'ity programa ity
Valiny amin'ny Cmlrz1
Ccruizm dia hoy izy:
Mamaly an'i Ccruizm
Placeholder Ramiro Gasca dia hoy izy:
Amin'ity indray mitoraka ity dia handresy aho!
Mamaly an'i Ramiro Gasca
Marcos Gonzalez dia hoy izy:
Mirary soa ho an'ny rehetra !!
Valiny tamin'i Marcos Gonzalez
Wichadas222 dia hoy izy:
Iriko ity programa ity
Valiny tamin'i Wichadas222
Manantena aho fa mikasika ahy izany!
Rakelmon dia hoy izy:
Ho ahy dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra izy io, feno tokoa ...
Ndao jerena raha tsara vintana aho dia ho entiko mody!
Mamaly an'i Rakelmon
MCdelA dia hoy izy:
Toa fampiharana tsara izany. Enga anie mba hikasika !!
Valiny amin'i MCdelA
Mirary soa ho an'ny rehetra !!!
colomita dia hoy izy:
Tsy mikasika na inona na inona mihitsy aho, manantena aho fa hiova ny vintana !!
Mamaly an'i colomita
Bombi dia hoy izy:
Fampiharana tena tsara izy io. Azo atoro tanteraka.
Mamaly an'i Bombi
Danielgp dia hoy izy:
Tena tiako ny afaka mankafy ity rindranasa ity sy manararaotra ireo fiasa marobe ao aminy.
Valiny tamin'i Danielgp
Guillemxtv dia hoy izy:
Mamaly an'i Guillemxtv
Te handray anjara amin'ny raffle ho an'ity rindranasa ity aho.
Ity no fampiharana tsara indrindra azonao vakiana amin'ny antontan-taratasiko.
Manana raha tsara vintana aho ary anjarako no misarika.
Speedpainter dia hoy izy:
Iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fiddling amin'ny PDF, tena ilaina tokoa.
Mamaly an'i Speedpainter
Tordigan dia hoy izy:
Fampiharana tsara hamakiana doka.
Mamaly an'i Tordigan
Pedro Garcia dia hoy izy:
Fampiharana tsara hijerena ireo karazana antontan-taratasy malaza indrindra. Andao hojerentsika raha tsara vintana isika
Valiny tamin'i Pedro García
Jcmt38 dia hoy izy:
Tiako ity fampiharana ity, manana izay tsy ampy amin'ny IOS izy.
C Alcaraztello dia hoy izy:
Ary izaho koa !!! Tena hahasoa ahy izany
Mamaly an'i C Alcaraztello
@nosolowords dia hoy izy:
Nanandrana izany tamin'ny jailbreak aho ary izao dia ho tsara ny manana azy io ho toy ny ataoko amin'ireo rindranasa hafa 🙂
Mamaly an'i @nosolopalabras
Maria Violeta dia hoy izy:
Sintomy maimaimpoana ny kinova LITE ary tsy azoko andrasana izany satria mangataka kaody izay tsy haiko mitady ... misy afaka manampy ahy
Valiny tamin'i Maria Violeta